သောကမကင်းသောအလှူ — Steemit
တစ်ခါက မြို့မှာ "ကျောင်းသစ်ကျောင်း " ဆရာတော်ရှိသတဲ့ ဆရာတော်ကလည်း ကျောင်းသစ် စတည်ထောင်တာဆိုတော့ လာလာသမျှ လှူသမျှအကုန်လက္ခံလေ့ရှိတယ်……
တစ်နေ့မှာ ကျောင်းကို ဒါကာမ တစ်ယောက် ကျောင်းရောက်လာတယ်
ဒီနေရာမှာသိမ်ဆောက်လျှင် အလှူခံမလား တပြည့်တော်မ နေရာရှာနေတာမောလှပြီ ''
'' ဆရာတော်ကလည်း အေးအေး..ကောင်တာပေါ့
ကျောင်းမှာတော့ သိမ်မရှိသေးဘူး လှူမည်ဆိုရင်တော့ လက္ခံရတာပေါ့....''
''ကောင်းတာလုပ်တာဘဲ ဘာမြန်းဦးဇင်းတို့ဖတ်က ဆောင်ရွက်ပေးရမည်လည်း''
ဒီလိုနှင့်ဆရာတော်က သိမ်ဆောက်ရန်နေရာကိုပြပြီး နောက်တစ်နေ့အရောက်မနက်စောစော ၀မ်းသာအားရနှင့် သိမ်ကုန်းမြေကို သန့်ရှင်းရေးစလုပ်တယ် စလုပ်တဲ့နေ့စပြီး ရွာလိုက်တဲ့မိုး (၈)ရက်တောင်ကြာတယ် အလုပ်သမားတွေမဆင်းနိုင်ရှာဘူး ခြုံရှင်းတာအချိန်ကြာမှာစိုးတော့ အစိုးရစည်ပင်သာယာရေးကို သွားပြီးအမှိုက်ကားတွေ မြေတူးကားတွေသွားငှါး အားတက်သရောလုပ်လိုက်တာ ငွေအတော်ကုန်သွားတယ် သိမ်မြန်မြန်ရလိုဇောနဲ့လုပ်လိုက်တာ တစ်ခဏခြင်းဆိုသလို မြေပြင်အတိဖြစ်သွားတယ် သိမ်မြေနှုတ်ဘို့ ဆရာတော်ကြီးများကို သွားရောက်လျှောက်ထား ဆရာတော်တွေက အစိုးရကိုသိမ်မြေဂရမ်လျှောက်ရသေးတယ် ခွင့်ပြုမှဆောက်ခွင့်သမုတ်ခွင့်ရသတဲ့ အတော်ကို ရှုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဘဲ သိမ်လှူမည့်ဒါယကာမကို သွားပြီးပြေားပြတယ် လှူမည့်သူကလည်း အခုဆောက်ချင်လှပါရဲ့ မလှူရလျှင်သူမှာသေတော့မှာပါ စသဖြင့်အတော်ကို ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေတာပေါ့ ....
အဲ့ဒီနေ့ကစပြီး တက်လိုက်တဲ့ပြဿနာ ဘယ်ကစတက်လည်းဆိုတော့ လှူမည့်သူက မှတ်ပုံတင်ပြောက်နေသတဲ့ အစိုးရကိုသိမ်မြေဂရမ် လျှောက်မည်ဆိုတော့ လုပ်မရပြန်ဘူး ဂရမ်အတွက်ကုန်ကျငွေလည်းမပေးနိုင်ဘူး အဆင်ပြေအောင်မိမိဘာသာ လျှောက်လိုက်မှဘဲဆိုပြီး မိမိဘာသာ လူတစ်ဦးကိုအစားထိုးပြီး လျှောက်လိုက်တယ် ဆရာတော်ကလည်း အသက်ကြီးပြီလေ သူမသေခင် သိမ်ဆောက်လှူဒါန်းတာကို မြတ်ဝါးထင်ထင်တွေ့သွားချင်ရှာတာပေါ့ ဒီလိုနဲ့လုပ်လိုက်တာ ကုန်ကျငွေ ၁၇ သိန်းကျော်ကုန်သွားတယ် ဒါယကာမက တစ်ပြားတစ်ချက်မှ မလှူသေးဘူး ဪ၊.. နောက်တော့သူလှူမှာ ထင်ပါရဲ့ဆိုပြီး ဆက်သွားနေရတာပေါ့ ....
အဲ..ခွင့်ပြုမိန့်ကျလာတော့ လူစားထိုးထားတဲ့နာမည်နဲ့ကျလာပါရော ဆောက်မည်ဆိုတော့ ဆရာတော်သမားတော်တွေလျှောက်တော့ နာမည်ကပြောင်းမရဘူးတဲ့ လာလျှောက်တဲ့သူတွေကိုသနားသော အားဖြင့် ထဲ့ပြီးလုပ်ပေးပါ သူတို့ကအလှူရှင်တွေမို့ပါ စသဖြင့်ဆရာတော်ကို လျှောက်တော့ဆရာတော်က သိမ်ဒါယိကာအဖြစ်တော့မရဘူး သိမ်ဝိဟာရဒါယိကာမအဖြစ်ဘဲရမည်တဲ့ အင်းဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ သူလုပ်ချင်တဲ့ အလှူကို ကိုယ်ကဝိုင်းကူပေးတာဘဲလေ ဒါနဲကသိမ်မြေနှုတ်ပွဲ သိမ်မြေသမုတ်ပွဲတွေကျင်းပပေးတာပေါ့ ငွေကြေးလည်းကုန်သွားတာ မူလအလှူရှင်က အလှူငွေမပါပြန်ဘူး ဘုန်းကြီးကလည်း ဆောင်ရွက်မည့်ဆရာ တော်တွေပင့်ထားတာ အပါး (၄၀)တောင်များကြီးနဲ့လုပ်ရတာ နေကုန်ဘဲ မလွယ်ဘူးလေ ....
ဘုန်းကြီးခမျာ မိမိစုထားတာလေးနဲ့ အလှူငွေကိုထည့်ပြီးလှူဒါန်းမှုလုပ်ကာ သိမ်သမုတ်ပွဲချိန့်ချိန့်သဲသဲ အောင်ပွဲလုပ်ပြီးသွားတော့ သိမ်အမည်က'' သာသနာ့အာယုပါလကာရီတဲ့ '' အဲ့ဒီအချိန်ထိ ကျောင်းဘုန်းကြီးကို အလှူငွေတစ်ပြားမှ မလှူဒါန်းသေးဘူး သိမ်သမုတ်ပွဲသာ ပြီးသွားတာ သိမ်ဆောက်မည့်ဒါယကာမက တစ်ပြား တစ်ချပ်မှမလှူသေးဘူး ဪ... သူ့အသိနဲ့နောက်တော့လှူမှာပါလေ သူလှူမည်ပြေားထားတာဘဲ....
ဒီလိုနဲ့ တစ်လအကြာ သိမ်အဆောက်အဦတော့ ဆောက်လုပ်မည်ထင်ပါရဲ့
ဒါယကာမကြီးကို ခေါ်ပြေားတော့ တပြည့်တော်မ ဆောက်မယ် အုတ်မှာထားတယ်
ကျောင်းလာပို့တာက အုတ် (၁၇၀၀) ဘိလပ်က ၁၀လုံး ထုံးက အလုံး ၂၀ ကျောင်းဆောက်ဖို့ ကျောင်းကို လာပို့ရှာတယ် ဘုန်းကြီးခမျာ ဘာပြေားရမှန်းမသိဘူး လိုတော့ထက်ဝယ်မှာတဲ့အခုတော့ အုတ်မြစ်ဘဲဆိုတော့ လောက်ငမှာပါ ဘုန်းကြီးကလည်း နောက်တော့ အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်ဆိုပြီး လက္ခံရပြန်တယ် ....
ကဲ ပနတ်ရိုက်စပြီး အိုးစည်ဗုံမောင်းတွေနဲ့ ကန်တော့ပွဲက ၁၇ ပွဲများလိုက်တဲ့ပွဲ စပြီးတူးပြီလုပ်ငန်းစတင်တာပေါ့ ဈေးပေါဆုံးတွေငှါးပြီးခိုင်းလိုက်တာ ကိုယ့်ရို့ကားယား မြေတူသူကိုလည်း ပိုက်ဆံအပြေမခြေ တူးရင်းနဲ့မြေတူးခမျာ တစ်နေ့ရနိုးနိုးနဲ့ ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကသနားလို့ သူခမျာလည်းစားရေးသောက်ရေးကရှိသေးတယ်လေ လိုတာပြေားဆိုပြီးလုပ်အားခတွေထုတ်ပေးရပြန်တာပ့ါ ဒါယကာမကြီးကလည်း ပေးတော့ပေးတယ် တန်ရာတန်ကြေးမပေး...
ကဲကဲ အဆင်ပြေအောင် ဘုန်းကြီးဘဲပေးလိုက်ပါ့မယ် ဘုန်းဘုန်းတပြည့်တော်မ ငွေမပါခဲ့လို့ နောက်နေ့ပြန်ပေးမယ် ချေးဦး အေးအေးရပါတယ် ....
နောက်တစ်ပါတ်သာကြာသွားတယ် ချေးငွေကပြန်မပေး တောင်းပြန်လည်းခတ်တာကိုး နေပါစေတော့ ငွေက များလာတော့တောင်းမိပြန်တယ် ဘယ်နေ့ကချေးငွေလေးပြန်ပေးပါဦး ဘုန်းဘုန်းလည်း သုံးစရာမရှိတော့လို့ တောင်းတော့လည်း ဘုန်းဘုန်းကိုပေးပြီးပြီလေ နှစ်ခါမတောင်းနဲ့တဲ့သူကမှတ်မိတယ် အဲဘုန်းကြီးအမှားဘဲလေ သတိမေ့တက်သူကို သွားချေးမိတာကိုး သူကအမေ့ခံပြီးငြင်းတော့လည်း ဘုန်းကြီးခဗျာ လှူတာဘဲလေ ကိုယ့်ကျောင်းအတွက်လုပ်တာဘဲ ဘယ်တက်နိုင်ပါ့မည်လည်း...
အောင့်သက်သက်နဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာကြွားတာကြားခဲ့တယ် သူသိမ်ဆောက်တာ သိန်း ၁၂၀ ကျော် ကုန်တယ် စသဖြင့်ကြွားလုံးကများ၊ ဘုန်းဘုန်းဘတ်ကစိုက်ထုတ်ကုန်ကျငွေစစ်ကြည့်တော့ (***)သိန်း /
သိမ်အလှူအစ်မထဲ့ငွေက (****)သိန်း အားလုံးတစ်ကယ်ကုန်ကျငွေစာရင်းကြည့်တော့ သိန်း ၂၄၀ အလှူအစ်မက သူလှူတာဆိုပြီးကြွား အများကောင်းမှုတွေ ကဗျည်းတက်ရတော့မည်ဆိုတော့ ကန့်ကွတ်မှုတွေကများဒါဆို အကုန်လှူပါလားဆိုတော့ မလှူနိုင်ဘူး သူ့သိမ်ကို သူများတွေကဗျည်းထိုးတာမခံနိုင်ဘူး ဆိုကာ ဘုန်းကြီးရန်လုပ် ဪ အလှူက သောကတွေများပါလားနော် ........
အလှူထက် ကြွားလုံးတွေများ နာမည်လိုချင်တာများ ဂုဏ်လုပ်တာများ တစ်ကယ်တော့ အလှူရှင်တွေက သောကတွေမကင်ဘဲလာလှူတာ ဒီတစ်ခါ ဘုန်းဘုန်းကို သောကတွေပေးသောအလှူ ...
ဒီမှာ ဒါယကာမကြီး ဒါယကာမကြီးလှူတာ ဘုန်းကြီးက ဒီကုသိုလ်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးနော် "
"ဒါယကာမကြီးလှူတာ ဒါယကာမကြီးကိုယ်တိုင် ကုသိုလ်တွေအကုန်ပြန်ယူသွားတာ"
"ဘုန်းကြီးဆီမှာ ဘာမှ မကျန်တော့ဘူးဒါကြောင့် ဒါယကာမကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကား မပြေားနိုင်ဘူး "
လှူနိုင်လျှင်ပြတ်ပြတ်သားသားလှူ သောကတွေတော့ မလှူခဲ့ပါနဲ့ ပြန်ယူသွားပါတော့.....
#c-square #steemit #esteem #partiko
chirstonawba (8)2years ago (edited)
Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have receiveda0.37% upvote from us for your 95 Partiko Points! Together, let's change the world!